'Arlene' waxaa la sameeyay 40 maalmood ka hor bilowga xilli duufaaneed | Saadaasha Shabakadda
Xilliga duufaannada, in kasta oo ay si rasmi ah u billaabaneyso 1-da Juun ayna dhammaan doonto 30-ka Nofeembar, haddana waxay leedahay halyeeyo:Arlene', duufaan kulul Wax dhaawac ah kuma geysan iyada oo laga sameysanayo meel ka durugsan xeebaha iyo jasiiradaha, laakiin si gaar ah ayey u garaaceysaa tan iyo markii waxay samaysatay 40 maalmood ka hor sidii caadiga ahayd.
In kasta oo aysan ahayn duufaantii ugu horreysay ee kulaylaha ee kacda ka hor xilli ciyaareedka, haddana sannadihii ugu dambeeyay kuwo cusub ayaa sameysanayay Abriil markasta. Ilaa hadda, 'Arlene' ayaa galay kaalinta labaad tan iyo dayax gacmeedyadii.
Duufaan dabadheeraad ah ayaa la sameeyay weji hore oo qabow oo ku habsaday Badweynta Atlantik badhtamihii Abriil. Nidaamkan lama habeynin ilaa Abriil 17, sababo la xiriira shirar goos goos ah oo bilaabmay inuu ka dhaco gudaha iyo hareeraha wareegga; Si kastaba ha noqotee, ma ahayn illaa iyo Abriil 19 markii la dhammaystiray waxaana loo kala saari karaa inuu yahay niyad-jabka kulaylka 1 by Xarunta Duufaanta Qaranka (CNH) markay tahay 15.00 UTC isla maalintaas.
Maalinta ku xigta, Abriil 20, Waxay ka soo noqotay niyad jab ilaa duufaan kuleyl ah oo ay ugu magac dareen 'Arlene', oo dabaysha ugu badan ay ahayd 85km / saacaddii 1 daqiiqo, cadaadiskeeduna ugu yaraa yahay 993mbar. Maaddaama laga sameeyay meelo ka fog meelaha lagu noolaan karo, wax khasaare ah ma geysan.
Sawir - Kanaalka Cimilada
Xilligii Duufaanta ee 2017 ayaa la filayaa inuu ka xoog badan yahay sidii hore, sida laga soo xigtay Oscillation Cimilada Caalamiga ah, oo leh 12 duufaano ah iyo ilaa 6 duufaanno kuwaas oo 2 ama 3 ay muhiim noqon karaan, in kasta oo El Niño ay tahay dhacdo wali hurudda.
'Arlene' waa samayskii ugu horreeyay ee duufaannada sanadka, ugu dhakhsaha badan waxaa xigi doona Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, Withney.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » 'Arlene' waxaa la sameeyay 40 maalmood ka hor bilowgii xilli duufaaneed
El Torno waxay isu diyaarineysaa ka hortagga saameynta isbeddelka cimilada